Ogaden News Agency (ONA) – Ra’iisul-Wasaarihii Dalka Pakistan oo Xilkii Laga Qaaday.
Ra’iisul-Wasaarihii Dalka Pakistan oo Xilkii Laga Qaaday.
Maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa ka mamnuucday Ra’iisul-Wasaare Nawaz Shariif inuu xafiis dadweyne qabto, kuna amartay inuu si deg deg ah isku casilo.
Afhayeen u hadlay xafiiska Ra’iisul-Wasaaraha, ayaa waxyar kadib xukunka maxkamadda ku dhawaaqay in Shariif uu aqbalay go’aanka maxkamadda, islamarkaana uu ka tagay xafiiska. Maxkamadda ayaa Shariif ku heshay inuu hanti badan dibedda ku urursaday, qariyey, islamarkaana u noolaa si ka baxsan awoodiisa dhaqaale.
Guddiga maxkamadda oo ka kooban shan garsoore ayaa gebigood isku raacay xukunkan, waxayna ugu baaqeen mas’uuliyiinta la dagaalanka musuq maasuqa in ay baadhitaan ku sameeyeen gabadha Nawaz oo lagu magacaabo Maryam, seygeeda iyo wasiirka maaliyadda Pakistan Ishaq Dar.
Isha Dar ayaa sidoo kale maxkamadda waxay ka mamnuucday inuu wax xafiis ah qabto. Maxkamadda ayaa sidoo kale amartay in baadhitaan musuq-maasuq lagu sameeyo laba wiil oo uu dhalay Nawaz, oo lagu kala magacaabo Hussain Nawaz iyo Hassan Nawaz.